အကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံး Lavender ဆီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအမွှေးအကြိုင်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ | ဟိုင်ရီ
aromatherapy Lavender ဆီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအမွှေးအကြိုင်
EINECS နံပါတ် .:
FEMA အမှတ် .:
နေ့စဉ်အရသာ၊ အစားအစာအရသာ၊ ဆေးရွက်ကြီးအရသာ၊ စက်မှုအရသာ၊ ဆေး၊ ရေမွှေး
fruity ချိုမြိန် topnote, လတ်ဆတ်သော herbaceous
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
Linalool 30%, Linalyl acetate 40%, Lavandulyl acetate နှင့် Lavandulol
1 Net Wt ။ ဂါလံတွင် 50KGS / 180KGS ပမာဏ၏ GI ဗုံ ၂ ဝယ်ယူသူအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း ၃ Alumiunm ပုလင်းတွင် ၁ ကီလိုဂရမ်၊ ၂ ကီလိုဂရမ်၊ ၅ ကီလိုဂရမ်စီအသေးများ
အရေအတွက် (ကီလိုဂရမ်) ၁ - ၁၀၀ 101 - 300 301 - 1000 > 1000
HaiRui Lavender ဆီ Pharma အဆင့် CAS အမှတ် 8000-28-0
Refractive အညွှန်းကိန်း 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 1.459-1.469
Flash Point ၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ပျော်ဝင်နိုင်သော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
အကြောင်းအရာ Linalool 30%, Linalyl acetate 40%, Lavandulyl acetate နှင့် Lavandulol
လာဗင်ဒါရေနံတစ်ခုဖြစ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ ကရရှိခဲ့သည် ပေါင်းခံ အချို့သောမျိုးစိတ်များ၏ပန်းပွင့် spikes မှ လာဗင်ဒါ။ ပုံသဏ္distinguာန်နှစ်ခုကိုခွဲခြားထားသည် - လာဗင်ဒါပန်းပွင့်ဆီ၊ အရောင်မဲ့သောဆီ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်မှုသိပ်သည်းဆ ၀.၈၈၅ ဂ / mL; နှင့် Lavender spike ရေနံ, အပင်မှအကွာအဝေးLavandula latifolia, သိပ်သည်းဆ 0,905g / mL ရှိခြင်း။
Lavender ပန်းပွင့်ရေနံသည်၎င်း၏အမည်ဖြစ်သည် အမျိုးသား Formulary ပြီးနောက် ဗြိတိန် Pharmacopoeia။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်မစင်ကြယ်ပါဝင်း; ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအရောအနှောတစ်ခုဖြစ်သည်phytochemicalsအပါအဝင် နေမင်း နှင့် linalyl acetate။
Kashmir Lavender ဆီသည်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဒေသများတွင်လာဗင်ဒါမှထုတ်လုပ်သောကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်လာဗင်ဒါအကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဘူဂေးရီးယား။
ရေမွှေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သောလာဗင်ဒါဆီသည်မွှေးကြိုင်သောကုထုံးတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ရနံ့သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောသက်ရောက်မှုရှိပြီးအပန်းဖြေမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ Lasea ချော linalool နှင့် linalyl acetate ၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်အတူလာဗင်ဒါပါဝင်သောဆေးတောင့, ချေါ Silexan ထုတ်လုပ်သူများကဂျာမနီတွင် anxiolytic တစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုသည်။ အတည်ပြုချက်သည်ဆေးတောင့်သည် lorazepam ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
နေလောင်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့သောအဖြစ်များသောရောဂါများကိုကုသရန်လည်းပြောထားသည်။ ၎င်းသည်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားနာကျင်မှုသက်သာစေရန်သို့မဟုတ်ရင်ကြပ်ခြင်းနှင့် bronchitic spasm များသက်သာစေရန်အတွက်ရင်ဘတ်အရောအနှောများတွင်ထိရောက်သော massage oil အရောအနှောများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆံပင်သုတ်ခြင်းအရောအနှောတွင်အသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ် nits များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်ကောင်းသောဖြီးသည့်အခါ ဦး ခေါင်းသန်းများကိုလည်းကုသနိုင်သည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ episiotomy ဒဏ်ရာစောင့်ရှောက်မှုအတွက် povidone-iodine အစား pavidone-iodine အစား lavender မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည်။
In vitro တွင်လာဗင်ဒါဆီသည် cytotoxic သာမက photosensitizinginging လည်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Lavender ဆီသည်လူ့အရေပြားဆဲလ်များကို cytotoxic ဖြစ်သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်၀.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော (endothelial cells နှင့် fibroblasts) ။ Linalool, lavender ဆီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, linalool lavender ရေနံ၏တက်ကြွအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ, ဆီတစ်ခုလုံး၏လှုပ်ရှားမှုရောင်ပြန်ဟပ်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ aqueous ထုတ်ယူမှုသည် mitotic အညွှန်းကိုလျှော့ချနိုင်သော်လည်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခရိုမိုဆုန်းပွားများမှုနှင့် mitotic သန္ဓေတည်ခြင်းများကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ ရေဖြည်ထုတ်ယူမှုကအားလပ်ချိန်၊ စေးကပ်မှု၊ ထို့အပြင်ဤသက်ရောက်မှုပြင်းအားထုတ်ယူနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၂၀၀၅ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ“ လာဗင်ဒါအဆီများနှင့်၎င်း၏အဓိကပါဝင်သည့် linalyl acetate တို့သည်လူ့အရေပြားဆဲလ်များသို့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်ဟုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သော်လည်း၊ Lavandula အဆီများအားအရေပြားနှင့်သက်ဆိုင်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဤ In vitro အဆိပ်သင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုမရှင်းလင်းသေးပါ။
phototoxicity ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဥရောပသုတေသီများအနေဖြင့် 2007 ခုနှစ်စုံစမ်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည် "Lavender ရေနံနှင့် sandalwood ရေနံကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုစနစ်အတွက် photohaemolysis သွေးဆောင်ဘူး။ သို့သော်ဤအရာဝတ္ထုများကြောင့် photosensitivity တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သတ်သောသတင်းအနည်းငယ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလင်း persistent တုံ့ပြန်မှုရှိသူလူနာတစ် ဦး နှင့် sandalwood oil အပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောဓာတ်ပုံ patch test ။ ”
Spike lavender ဆီကိုရံဖန်ရံခါရေနံပန်းချီတွင်အရည်ပျော်စေသည့်အရာအဖြစ်လည်းအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Francisco Pacheco သည်သူ၏ Arte de la pintura စာအုပ်တွင်လာဗင်ဒါအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြထားသည်။
၁။ Mini မှာယူနိုင်ခြင်း 1KG, 2KG, 5KG ရရှိနိုင်သည်
3. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု
ရှေ့သို့ အလှကုန်ကိုယ်ခန္ဓာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအစိုဓာတ် Aloe Vera Oil
နောက်တစ်ခု: Diffusers မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Rosemary ရေနံ
သန့်စင်သော Lavender ဆီ
အမြောက်အများလက်ကားဈေး Deep Brown Patchouli ဆီ F ...
သဘာဝနှင့်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးမှုအမျိုးအစား Linseed oi ...